Maqaalka Renae Scott ee Martech Zone |
Maqaallada by Renae Scott
Istaraatiijiyad caan ah oo la wado, dhiirrigeliye dhise kooxeed iyo hoggaamiye fulineed oo si buuxda ugu hawlan oo leh khibrad ballaadhan oo kor u qaadeysa iibka iyo faa'iidooyinka loogu talagalay macaamiisha waaweyn inta lagu jiro xilliyada tartanka sii kordhaya iyo hoos u dhaca dhaqaalaha. Khibrad u leh guud ahaan Makhaayadaha, Jimicsiga, iyo Alaabada la Baakadeeyey. Xirfadaha hoggaaminta xuquuqaha adag.
CMO-on-the-Go: Sidee Gig Workers uga Faa'iidaysan karaan Waaxdaada Suuqgeynta
Talaado, Maarso 20, 2018 Isniin, Maarso 19, 2018 Renae Scott
Celceliska muddada hawlgalka CMO waa uun wax ka badan 4 sano - ugu gaaban qaybta 'C-suite'. Sababta Cadaadiska lagu hayo ujeedooyinka dakhliga, gubashadu waxay ku xigi doontaa lama huraan. Taasi waa halka shaqada gigtu ka timaaddo. Ahaanshaha CMO-on-the-Go waxay u oggolaaneysaa Madaxa Suuqa in ay dejiyaan jadwal u gaar ah oo ay qaataan oo keliya waxa ay og yihiin in ay xamili karaan, taas oo keeneysa shaqo tayo sare leh iyo natiijooyin wanaagsan oo xagga hoose ah. Hase yeeshe, shirkaduhu waxay sii wadaan go'aannada istiraatiijiyadeed ee muhiimka ah